Hizaha any Aotrisy - Inona no hatao ary hitsidika amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra | Vaovao momba ny dia
Susana godoy | | Aotrisy
Satria rehefa mandeha amin'ny toerana mbola tsy nalehantsika isika dia te hahita ny zava-drehetra nefa tsy diso amin'ny antsipiriany rehetra. Saingy tsy maintsy mankafy ilay dia ianao ary tsy voatery mandeha amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa foana izany mba hitady tsangambato na zoro fototra. Fa ny fahalalana ny fijanonana mandritra ny minitra vitsy hiaina traikefa nahafinaritra amin'ny fomba fijery hafa. Noho izany, androany dia manome hevitra izahay inona no hatao sy jerena any Aotrisy.
Un toerana mahagaga amin'ny fitsidihana be dia be, nefa koa ampy hankafizana, na dia tsy ela loatra aza ny fijanonanao. Betsaka ny zavatra azonao atao sy jerena any Aotrisy, fa avelanay anao kosa ny tena ilaina sy izay rehetra mendrika izany. Mijanona ho anao ihany ny mandamina ny tenanao sy manararaotra an'izany!
1 Ireo lapan'ny emperora any Wina
2 Ankafizo ny fomba fijery amin'ny lalana Grossglockner
3 Inona no ho hita any Aostralia: Salzburg
4 Ski any Aotrisy
5 Ny tontolon'ny kristaly ao Wattens
6 Hallstatt, ilay tanàna amoron-drano
Ireo lapan'ny emperora any Wina
Ny renivohitr'i Autria dia tranon'ny toerana maro hodinihina. Angamba tokony holazaina fa hatsaran-tarehy tena tsara izy rehetra. Saingy mazava ho azy, rehefa mandeha matetika amin'ny andro maro isika, dia mila manararaotra azy ireo isika. Noho izany, iray amin'ireo fitsidihana tena ilaina ny lapan'ny mpanjaka. Ny tena manan-danja dia ny lapan'i hofburg izay lehibe indrindra ary koa taloha. Voalaza fa tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo izy io, na dia marina aza fa nisy fanitarana sasany.
Etsy ankilany, hitantsika ny Lapan'i Belvedere izay naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia misy trano roa ary atokan'ny zaridaina lehibe iray manodidina azy ireo amin'ny fomba majika. Farany, mihaona amin'ny Lapan'i Schönbrunn. Manana zaridaina lehibe koa izy io ary nambara ho UNESCO World Heritage Site. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy apetraka amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo izy io.
Ankafizo ny fomba fijery amin'ny lalana Grossglockner
Mety hieritreritra ianao fa ny làlana dia tsy ao anatin'ny zavatra hatao sy jerena any Aostria, fa amin'ity tranga ity dia. Faritra misy fiolahana maranitra, tehezan-tendrombohitra isan-karazany fa tsara tarehy be amin'ny lafiny roa. Voalaza fa iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Eropa. Ny fandalovana azy io dia handany fotoana lava aminao satria 48 kilometatra io, fa tsy isalasalana fa hijanona amin'ny fotoana samihafa ianao mba tsy hahalavorary ny fotoana.
Hankafy ny kijana sy ny farihy ianao, nefa tsy manadino ireo vongan-dranomandry. Tsarovy izany tsy misokatra amin'ny alina ary eny hatramin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Betsaka ny mpizahatany mahazo azy io, manerana an'izao tontolo izao. Na dia tamin'ny taona 2021 aza, ny mexicans Mila ETIAS izy ireo hahafahany miditra ao amin'ny EU ary mankafy ny toerana sy toerana toa izao. Ho vaovao fepetra takiana amin'ny fitsangatsanganana any Eropa avy any Mexico.
Inona no ho hita any Aostralia: Salzburg
Ankoatry ny hatsarany ivelany, izay azo ankasitrahana isaky ny zoro, dia manana ny ao anatiny koa izy. Toerana iray mampiantrano fety fahavaratra mahafinaritra izy io ary, tsy maintsy tadidintsika izany nahita an'i Amadeus Mozart teraka. Ny foibeny manan-tantara dia manana ny Katedraly, ary koa ny Abbey ao San Pedro na ny Monasiterana. Manana lapa sy tranombakoka marobe ihany koa izy io.
Ski any Aotrisy
Izy io dia iray amin'ireo zavatra tokony hatao sy jerena any Aotrisy. Satria misy toerana tonga lafatra maro hampiharana an'ity fanatanjahantena ity. Na dia mihoatra lavitra noho izany aza izy io, satria anisan'ny fomban-drazany na kolontsain'izy ireo koa izany. Noho izany, tsy maintsy miresaka momba ny famantarana marobe tokony hikajiana isika. Ohatra, hitantsika Innsbruck eo am-pototry ny Alpes, miaraka amina hetsika fialam-boly. Mazava ho azy, iray amin'ireo malaza indrindra koa Ischgl, miaraka amin'ny tehezan-tendrombohitra maro sy fahitana mahatalanjona. Tsy manadino Sölden na Kitzbühel, izay ahitantsika tanàna manan-tantara, miaraka amin'ireo mpizahatany marobe, izay tsy tonga matetika amin'ny fanaovana ski.
Ny tontolon'ny kristaly ao Wattens
ny Vokatra Swarovski Miorina ao Wattens izy ireo. Drafitra lafo vidy sasany izay efa malaza manerantany ary noho izany dia tsy maintsy nanokana toerana malalaka ianao mba hankafizanao azy ireo amin'ny fomba feno. Ny Crystal Worlds no valan-javaboary izay ho hitantsika ao Wattens, 17 kilometatra miala an'i Innsbruck. Ahoana no hahakely azy io, manana zaridaina lehibe, tranombakoka ary trano fisakafoanana ary koa kianja filalaovana izy hahafahantsika mandeha miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Hallstatt, ilay tanàna amoron-drano
Tsy afaka nanadino ireo tanàna teny amoron'ny farihy izahay, satria izy ireo ihany koa no fototry ny firesahana ny hatsarana ary koa ny fitoniana miaina ao aminy. Tokony holazaina fa hatramin'ny taonjato faha-XNUMX dia tsy azon'ny sambo, na amin'ny lalana tery ihany. Ny sasany amin'ireo toerana lehibe eto amin'ity tanàna ity dia ny toeram-pitrandrahana sira, izay zokiny indrindra eto an-tany. Ary koa ny kianja lehibe misy tarehy izay feno voaloboka sy voninkazo isan-karazany. Izy io koa dia manana fiangonana telo sy fihadiana arkeolojika ary ny Tilikambo Rudolf, izay naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Toa betsaka ny zavatra azo jerena sy atao any Aostralia, noho izany dia heverina ho faritra fizahan-tany tsy misy dikany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Aotrisy » Ny tsara indrindra azonao atao sy jerena ao Aotrisy
Sehatra voajanahary tsara tarehy 5